Ngabe uAce Magashule uzoboshwa na? | Scrolla Izindaba
Ngabe uAce Magashule uzoboshwa na?
Kunombuzo omkhulu kunayo yonke kwezepolitiki yaseNingizimu Afrika.
Ngabe uNobhala Jikelele weqembu le-ANC uAce Magashule uzoboshwa na?
Kubukeka sengathi impela – uzoboshwa.
Ngesonto eledlule, uMagashule nababambisene nabo badalula izindaba zokuthi uzobhekana nani, waxwayisa ngokuthi “ukuboshwa kwakhe kuzoba sengathi uboshwa ngamaphoyisa ase-Hollywood”.
Uma kunjalo, lokhu bekuyisinyathelo sokuzama ukuthola uxhaso kanye nokwesekwa.
Kodwa akekho osake wameseka kulokhu.
Akekho noyedwa umuntu osezingeni le-ANC ovelile ukuthi avikele uMagashule, osolwa ngamacala enkohlakalo ahlobene nabakwaGupta athinta ipulazi lobisi e-Vrede.
NgoMsombuluko, uNgqongqoshe wezokuThutha uFikile Mbalula ubhale ngoMagashule ku-Twitter.
Ebhala ku-Twitter, ubale nozakwabo kaMagashule oseLuthuli House, uCarl Niehaus, ophinde abe ngumkhulumeli weNhlangano Yezempi (MKMVA). UMbalula uchaze uNiehaus kanye nomengameli weNhlangano Yezempi uKebby Maphatsoe “njengezigebengu ezizibiza nge-MK”.
UNiehaus uyingxenye yethimba likaMagashule eLuthuli House futhi ucele ukuthi uMbalula aboshelwe isimo esingesihle sezitimela e-Gauteng.
Impendulo kaMbalula? Ubhale wathi: “UCarl Niehaus wasenga ezimithiyo ngokushona kukanina, kanti namhlanje ukhombisa ukuzethemba ngenkukhu esongela wonke umuntu, okuhlanganisa nombuso phakathi.”
I-Tweet esuswe kamuva, uMbalula ubebhale kanje: “Angimusabi; uJacob Zuma, uCarl Niehaus, uKebby Maphatsoe, uBusisiwe Mkhwebane kanye noAce Magashule. Lokho kumele bekwazi. ”
UMbalula noMagashule bake baba nengxabano eminyakeni edlule.
Ngale kwezingxabano kanye nokulwa okwenzeka eqenjini le-ANC, isibindi sikaMbalula sokubhala ama-Tweet anje futhi anokudelela, kusitshela into eyodwa.
Ukuboshwa kukaMagashule nokumangalelwa ngamacala enkohlakalo kuyasondela.
I-scrolling isiqeshana semibono.